जर्सा’बले दिउँसै माताजीसँग चर्किकला देखाएपछि… « Naya Page
जर्सा’बले दिउँसै माताजीसँग चर्किकला देखाएपछि…
प्रकाशित मिति : 13 March, 2019 12:30 pm
काठमाडौं, २९ फागुन । प्रधान सेनापतिले आचरणयुक्त र क्षमतावान सेनाको अवधारणा सुनाएर मात्रै के गर्नु, जर्साबले दिनदहाडै माताजीसँग चर्तिकला देखाएपछि !
पूर्वी पृतना हेड क्वार्टर, इटहरीका दुईतारे प्रमुख समीर शाहीले एक जना माताजीलाई पछि लगाएर मर्निङवाक गर्दै रमिता देखाएपछि सेनापति पूर्णचन्द्र थापा धेरैचोटी जंगिसके । तर, उनी अझै ‘लाइनमा’ आएनन् ।
माताजी, अर्थात् झारफुक गर्ने, ग्रहदशा हेर्ने हैन, बरु सैनिक संगठनकै ग्रहदशा बिगारिदिने हुन् तिनी । ३५–३६ वर्षकी ती महिलासँग जर्नेलले विशेष सम्बन्ध राखेको भनेर पटक–पटक जंगी अड्डा र शशीभवनमा खबर पुगिसक्यो । तर, बानी जस्ताको तस्तै ! हेर्दा राम्री, हिस्सी परेकी छन् ।